ကျန်းမာသောအစားအစာများ - AVAREKAI အရောအနှောပြုလုပ်နည်း - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ကျန်းမာသောအစားအစာများ - Avarekai အရောအနှောပြုလုပ်နည်း
နေအိမ် ချက်ပြုတ်နည်းများ ရေးသားထားသည့် oi-Staff စာအုပ်။ Arpita Adhya| ဖေဖော်ဝါရီလ 19, 2018 တွင် Avarekai အရောအနှောစာရွက် Avarekai အရောအနှောပြုလုပ်နည်း | လွယ်ကူသောရေစာစာရွက် Boldsky
obsessive အစားကောင်းကြိုက်သူများအဖြစ်, ရေစာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်နိူင်ပါ။ သို့သော်တစ်နေ့လုံးအဆက်မပြတ်မြည်သောမုန့်များအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သိုလှောင်ထားသည့်အမှိုက်ပမာဏအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သည်မလွှဲမရှောင်သာခံစားရသည်။
သရေစာကကျန်းမာနေမယ်ဆိုရင်အခုစဉ်းစားကြည့်။ ကောင်းပြီ၊ သင့်ကိုအရသာရှိတဲ့ဘူးသီးများကို crunchy crispy mouthful အရသာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်ရုံသာမကအာဟာရကောင်းမှုများစွာကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ပြီးအာဟာရကောင်းစေခြင်းဖြင့်သင့်အားအာဟာရကောင်းစေခြင်းဖြင့်သင့်အားအာဟာရကောင်းစေမည့်အာဟာရဓာတ်များကိုသင့်အားလတ်ဆတ်စွာစားသုံးပါစေ။
Avarekai ပဲ (သို့) ပြားချပ်ချပ်သည်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ချက်ပြုတ်နိုင်သည့်ချက်ပြုတ်ပစ္စည်းအဖြစ်နာမည်ကြီးသည်။ ဒီနေရာမှာဒီကျန်းမာသောပဲမျိုးစုံကိုလေမှုတ်ထားတဲ့ပန်းကန်ထဲမှာသိုထားမယ်ဆိုရင်လပေါင်းများစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့မုန်ညွတ်စာရွက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ ယခုသင်၏နေ့စဉ်စားနပ်ရိက္ခာစာရင်းမှထိုကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအမှိုက်များကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်ခြင်းကိုခံစားပါ။ ဒါကြောင့်ချစ်ခင်ရတဲ့စာဖတ်သူတွေကိုရင်ဖွင့်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမကြာခင်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။
အိမ်တွင်း AVAREKAI အရောအနှောမှု AVAREKAI အရောအနှောမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း AVAREKAI ရောနှောမှုမှတ်တမ်း။ အဆင့်ဖြင့် AVAREKAI အရောအနှောအဆင့် AVAREKAI အရောအနှော VIDEO အိမ်လုပ် avarekai အရောအနှောစာရွက် | avarekai အရောအနှောကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း အဆင့်ဆင့် Avarekai ရောစပ်မှု Avarekai ရောစပ်ထားသောဗီဒီယိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအချိန် ၄ နာရီ0မိနစ်ချက်ပြုတ်ချိန် ၁၅ နာရီစုစုပေါင်း ၄ နာရီ ၁၅ နာရီ
By Kavya မှပြင်ဆင်သည်
၁။ Avarekai ပဲ - ½ပန်းကန်
2. ရေနံ - နက်ရှိုင်းသောကြော်အတွက်
zindagi na milegi dobara အတွက် katrina kaif
၃။ အုန်းသီးခြောက် (အချပ်) - ၁ / ၄ ခွက်
4. မြေပဲ - ½ခွက်ကား
၅။ ဘင်္ဂလားဂရမ် (ကြော်) - ၁ / ၄ ခွက်
6. ဟင်းအရွက် - 6-8
၇။ ငရုတ်သီးမှုန့် - bs tbsp
8. ဆား - အရသာနှုန်းအတိုင်း
9. နနွင်းမှုန့် - ½ tbsp
၂။ Avarekai ပဲများကိုထည့်ပါ။
၄။ ၄-၅ နာရီကြာစိမ်ပါစေ။
6. avarekai ကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပါ။
၇။ Avarekai မျိုးစေ့များ၏အပြင်ဘက်အလွှာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖယ်ရှား။ သီးခြားထားပါ။
၁၀။ Avarekai မျိုးစေ့များကိုအလယ်အလတ်မှအနိမ့်အလတ်၌ကြော်ပြီးကြည်လင်သောရွှေရောင်အညိုမရောက်မှီတိုင်အောင်ကြော်ပါ။
၁၂။ မြေပဲများကိုအညိုရောင်ဖြစ်လာပြီး avarekai အစေ့များနှင့်အတူထားပါ။
15. အရောအနှောမှဂရမ် dal ထည့်ပါ။
၁။ အခွံမာသီး၏အချိုးသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုအရကွဲပြားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မြေပဲကိုပိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒါတွေကိုထပ်ပြီးထပ်ဖြည့်ပါ။
၂။ စိမ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်ရေနွေးဖြင့်စိမ်ပါ။ သင်၏ avarekai ပဲများသည်ကြာကြာမခံဘဲနူးညံ့ပါသည်။
အမှုဆောင်အရွယ်အစား - 1 ပန်းကန်လုံး
ကယ်လိုရီ - 468 ကယ်လိုရီ
အဆီ - 27,3 ဂရမ်
ပရိုတိန်း - 11.6 ဂရမ်
Carbohydrates - ၄၃.၄ ဂရမ်
အမျှင် - 4.6 ဂရမ်
တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် - မည်သို့လုပ်ရမည်
တစ် ဦး dal fry လုပ်နည်း
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲ
အရေပြား tan ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နေအိမ်ကုစား
လက်မှ mehndi အရောင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ